ပုံမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့ အသက်ရှင်လျက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖားလို့ အသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အာဖရိကန်အနောက်ပိုင်းဒေသ (Gabon) မှာတွေ့ရ တဲ့ ဖားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇီဝဗေဒအမည်ကတော့ Conraua goliath ဖြစ်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်အရှည် ၁၃ လက်မရှိပါတယ်။ အလေးချိန်
မန္တလေးမြို့ ညအချိန် လူသူပျက်လပ်သော လမ်းမကြီးများတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်လုယက်မှုများ ရှိနေကြောင်း ၎င်းလုယက်မှု များတွင် အမျိုးသမီးအချို့ ပါဝင်နေကြောင်း ကြုံတွေခဲ့ရသူ ဒေသခံ တစ်ချို့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းသို့အကြမ်းဖက်မှုများတွင် ဆိုင်ကယ်တားပြီး ရိုက်နှက်မှုများ ဆိုင်ကယ်စီးနေသူထံမှ လက်ကိုင်အိပ်၊ ဟန်းဖုန်းစသည့် လုယက်
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား မီးရထား လမ်း မိုင် ၂၂၀ ပြင်ဆင်မည်
မကြာခဏ မိုင်း ပေါက်ကွဲလေ့ရှိသော မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား မီးရထား လမ်းပိုင်းတွင် မိုင်ပေါင်း၂၂၀ကို ပြင်ဆင်မှုများစတင် ပြု လုပ် နေ ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ မီးရထား တိုင်းအမှတ် (၂) အင်ဂျင်နီယာ ဌာနမှ
ရှမ်းပြည်နယ် တာချီလိတ် မြို့နယ် မိုင်းဖုန်း (က) အုပ်စု ဝမ်းနား ကျေးရွာ တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ခွဲက တစ်ဖက် နိုင်ငံ တွင် ပြည့် တန်ဆာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိမ်လည်၍
နတ်တော်ညချမ်းတစ်ခုမှ ချမ်းအေးမှုအောက်တွင် နံ့သာစုံတို့၏ ရနံ့ သင်းထုန်စွာဖြင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ဆိုင်းသံဗုံသံများကြား ယိမ်းထိုး လှုပ်ရှားနေသော ခန္တာတစ်ခု။
အမျိုးအမည်ပင် မသိသည့် အမှတ်ရုပ်ထုများတည်ရှိနေရာ စင်မြင့် အဆင့်ဆင့်တွင် အစီအရီ ထွန်းညှိထားသော အမွှေးတိုင် မီးခိုးငွေ့ များ၏ လွှင့်ပါးမှုနှင့်အပြိုင် `ဒေါ်မိုးမိုး´ ၀တ်ဆင်ထားသော ရိုးရာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းအများဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသများတွင် ပါဝင်သောရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၌် ဘိန်းခင်းများ စတင် ဖျက်ဆီးပြီ ဖြစ်ကြောင်းမိုင်းဆတ် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်အုန်း က The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။ “တပ်မတော်က လုံခြုံရေးလိုက်ပြီး ဖျက်ဆီး နေတာပါ။ ဖျက်ဆီးတဲ့
ဆီးရီးယား နယ်စပ်အနီးရှိ တူရကီ ပိုင်နက်အတွင်း၌ Patriot ဒုံး ကျည်များကို ဖြန့်ချခြင်းသည် ကမ္ဘာစစ် အတွက် ပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ် သည်ဟု အီရန်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟက်ဆန်ဖီရူဇာ ဘာဒီက နေတိုး အဖွဲ့အား ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် သတိပေး ပြောကြား ခဲ့ပြီးနောက် အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် တင်းမာမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းသော အားဖြင့် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် (Solar) စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ၍ London Berlin အခြေစိုက် Relitec Co.,Ltd. ၏ ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် (Solar System) အသုံးပြုနည်း စနစ် ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ထားဝယ်မြို့ အနောက်ရပ် ပဒေသာ ဓာတ်ပုံ
တရုတ် နိုင်ငံသည် ဂျပန် နိုင်ငံနှင့် ရေပိုင်နက်အငြင်း ပွားမှု ပြဿနာဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေစဉ် အတော အတွင်း၌ ၄င်းတို့၏ ရေပိုင်နက် တိုးချဲ့သည့် အဆိုပြု ချက်များပါရှိသော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ကုလ သမဂ္ဂသို့ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း အင်တာနက်သတင်း တစ်ရပ် အရသိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ ကျွန်းမှ ၂ဝဝ ကီလိုမီတာ အကွာရှိ ကျွန်းစုများကို ၄င်းတို့ပိုင် ကျွန်းစုများအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ
အင်္ဂလန်မှ ပေးအပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာကို ပြည်တွင်းမှာပင် တက်ရောက်နိုင်
City & Guilds အဖွဲ့အစည်းသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တွင် အခြေ စိုက်သည့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ City & Guilds အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ခဲ့ သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၁၃၀)ကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်။ City & Guilds Instituteတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ချီးမြှင့်သည့် ဒီပလိုမာလက်မှတ်များကို ၄င်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်သင်ယူရန်မလိုဘဲ မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာပင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် သင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါ
တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကမ္ဘာပျက်တော့မည်ဟု ကောလာဟလ သတင်း များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြ သူ လေးဦးအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသ တွင်း မီဒီယာများက ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ လူဦးရေ ၂၈ သန်း နေထိုင်သော ချုံကင်း မြို့၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က အမျိုးသား နှစ်ဦးသည် အသံချဲ့စက် တစ်လုံးဖြင့် ဒေသခံများအား ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်၌ ကမ္ဘာပျက် တော့
မနက်အိပ်ရာ နိုးထပြီးချိန်တွင် ချက်ချင်း ရေသောက်ခြင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပြည်သူများစွာအတွက် နေ့စဉ်ပြုမူ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အရေး ပါသော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုလေး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် သိပ္ပံပညာရှင်များ သုတေသနပြုချက်အရ ၎င်းဟာ အလွန် အရေးပါပြီး ကောင်းကျိုးများစွာ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို လည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ နံနက်ခင်း ရေသောက် ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ တစ်ညတာ ပင်ပန်းတစ်ကြီး လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ်အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့တာအတွက် အဆင်မပြေမှုများ၊
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အား စထရိတ်စ်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာက ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွက် ထူးချွန် ထင်ရှား အာရှသားအဖြစ် ရွေးချယ် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှုများကို ရှေ့တန်းမှဦးဆောင် သူ ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံအများစု၏ ရှုမြင်သုံးသပ်မှုများကို အပြောင်း အလဲ ဖြစ်စေခဲ့သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပြောင်းလဲမှု များ၏ အကျိုးရလဒ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကို အံ့အား သင့် စေ
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဟီလာရီ ကလင်တန်နေရာတွင် အစားထိုးခန့်အပ်ရန်အတွက် သက်တမ်းရှည် ဒီမိုကရက်တစ် အမတ် တစ်ဦးနှင့် သမ္မတလောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရဖူးသူ ဂျွန်ကယ်ရီ ကို
လျှပ်စစ် ဆိုင်ကယ် အသုံးပြု လိုသူများ အတွက် ယိုးဒယား နိုင်ငံလုပ် Click ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပုံစံတူတဲ့ LVWEI အမှတ်တံဆိပ် လျှပ်စစ် မော်တော် ဆိုင်ကယ်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ နှစ်ယောက် တင်ဆောင်နိုင်ပြီး ဘက်ထရီခြောက်လုံးစနစ် (၇၂ ဗို့) ၁၂၀၀ ၀ပ်ပါ ၀င်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ အားအပြည့် သွင်းထားရင် တစ်နာရီ ၅၀ ကီလိုမီတာနှုန်း နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ခရီးအကွာအဝေး 80Kmအထိ မောင်းနှင်
သရက်သီး၊ ကုလားပဲလုံးဝါ၊ မတ်ပဲ၊ ငရုတ်သီးခြောက်၊ နမ့်ဖာလုံ ကုန်စုံများကို တင်ပို့လျက် ရှိပြီး အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ ပရဆေး ကုန်ကြမ်း၊ ဆောင်းမေခါး၊ တောင်လုံးကျော်၊ ဇာတိဖိုလ်သီး၊ မင်သော်၊ ရှိန်းခို၊ ဟင်းရိုင်းဖြူ၊ ကတ္တရာ သင်္ချေ၊ အုန်းဆီ၊ စပျစ်သီးခြောက်၊ Bentnovate-N ယားနာ ပျောက်ဆေးနှင့် Transit
၂၀၁၃တွင် ရန်ကုန်မီးလုံးဝပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ကြိုတင်စီစဉ်ထားဟု လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌက ယနေ့ပြုလုပ်သောသတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ
3G Network အသုံးပြုနိုင်သည့် GSM မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကချထားပေးခဲ့သော နံပါတ်များအတိုင်း (Number System) အားပြောင်း လဲမှုမရှိကြောင်း နေပြည်တော် ဖုန်းများဝ၉၄၂ဝ၇.....မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ရောင်းချပေးသွား
ညအချိန် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လုယက်မှုများတွင် အမျိုးသ...
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား မီးရထား လမ်း မိုင် ၂၂၀ ပြင်ဆင...
ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်Solar Systemဖြင့် လျှပ်စစ်စွ...
တရုတ် ပိုင်နက် တိုးချဲ့သည့် အစီရင် ခံစာ ကုလ သမဂ္ဂသိ...
အင်္ဂလန်မှ ပေးအပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာကို ပြည်တွ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွက် ထူးချွန် ထင်...
LED နှင့် LCD TV များတွင် Panel ထိခိုက် ပျက်စီး၍ြ...
“အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဂျွန်ကယ်ရီကို ...
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အမယ်သစ်များ တိုးမြှ...
ဆန္ဒပြ ဘုန်းတော်ကြီးမျုားသို့ မြတ်စွာဘုရား ပညတ်ပေးခ...
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး လမ်းလယ်ကျွန်းကို အုတ...
၂၀၁၃တွင် ရန်ကုန်မီးလုံးဝပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ကြို...
နံပါတ် အပြောင်းအလဲ မရှိဘဲ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများ ၂ဝ၁...